Streaming သည်အကြောင်းအရာကိုယနေ့သုံးစွဲရန်လူကြိုက်အများဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်လာသည်။ သီချင်းနားထောင်ခြင်း၊ ဂိမ်းကစားခြင်း၊ စီးရီးနှင့်ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းများပြုလုပ်ပါ။ ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့မှာ Android မှာထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းများအားလုံးကိုအမျိုးအစားတစ်ခုလုံးသီးသန့်ထားရှိသည်။ ဒါကြောင့်ဒီtoရိယာကိုလာမယ့်သတင်းကိုမဆိုသတိမထားမိပါစေနဲ့။
လျှောက်လွှာများ၊ အကြံပြုချက်များ၊ သတင်းများ (သို့) ထုတ်လွှင့်မှုနှင့်အတူနောက်ဆုံးသတင်းကိုရယူရန်အတွက်နည်းလမ်းများ။ သင်သည်သင်၏ Android ဖုန်းမှတေးဂီတကိုနားထောင်ရန်၊ ဂိမ်းကစားရန်သို့မဟုတ်အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကိုကြည့်ရှုရန်ကြိုးစားနေသည်ဖြစ်စေဤအပိုင်းရှိ streaming နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အရာအားလုံးကိုရှာဖွေနိုင်သည်။
Photocall TV နဲ့ဘယ် TV လိုင်းတွေကြည့်လို့ရလဲ
por Ignacio Sala လွန်ခဲ့တဲ့7horas .
မင်းရဲ့မိုဘိုင်းလ်တယ်လီဗေးရှင်းကြည့်တဲ့အခါမှာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအပလီကေးရှင်းအသစ်တွေနဲ့ / ဒါမှမဟုတ်ဝဘ်စာမျက်နှာတွေပေါ်လာတယ်။
Android အတွက်ထိပ်တန်းငါးရွေးချယ်စရာ Spotify
por ပါပလောချန် လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ပေါင်း .
Spotify သည် Android အသုံးပြုသူများအကြားထူးချွန်သောဂီတ streaming app ဖြစ်သည်။ အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခု ...
Rakuten TV ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း၊ ၎င်းအားချန်နယ်မည်မျှပေးသနည်း။
Rakuten ကိုငါတို့ကရုပ်ရှင်နဲ့အငှား ၀ ယ်လို့ရတဲ့ ၀ ယ်လိုအားနဲ့ streaming video platform တစ်ခုအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တယ်။
ခရက်ဒစ်ကဒ်မပါပဲ Netflix ကိုဘယ်လိုရနိုင်မလည်း
Netflix သည်အိမ်အရောက်ပို့ဆောင်ပေးသောဗီဒီယိုစတိုးတစ်ခုအဖြစ်မွေးဖွားခဲ့သည်။ အင်တာနက်သည်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ Netflix သည်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။
Spotify သည် desktop app အသစ်နှင့်ဒီဇိုင်းသစ်နှင့်အသစ်တစ်ခုကိုအသစ် ပြုလုပ်၍ အသစ်တင်လိုက်ခြင်းကိုကြေငြာလိုက်သည်။
စပိန်၌ယခုရရှိနိုင်သည့် Disney + ၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်သောစတား
၁၉၉၉ နိုဝင်ဘာလတွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ Disney + စတင်မိတ်ဆက်ချိန် မှစ၍ ဤပလက်ဖောင်းပေါ်ရှိအကြောင်းအရာများသည်အမြဲတမ်းရှိသည်။
နောက်ဆုံးတွင် Spotify သည်အရည်အသွေးဆုံးရှုံးမှုမရှိပဲ HiFi ဗားရှင်းကိုကြေငြာခဲ့သည်
Spotify သည်စျေးကွက်အတွင်းပထမဆုံးဝင်ရောက်နိုင်သည့်ဂီတ streaming ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ WhatsApp ကဲ့သို့၎င်းသည်အောင်မြင်။ ...
Apple ၏ video streaming ၀ န်ဆောင်မှုသည် Google TV နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်
ဗွီဒီယို streaming ၀ န်ဆောင်မှုများမြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောအချိန်ရောက်လာသည်။
Disney + သည်တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်သုံးစွဲသူ ၉၅ သန်းအထိရှိသည်
လက်တင်အမေရိကတွင်မလွှင့်မီ၊ ဒစ္စနေး၏လွှင့်ထုတ်လွှင့်သောဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှုဒစ္စနေး + တွင်သုံးစွဲသူ ၇၃ သန်းရှိသည်။
Netflix ထက်ပိုကောင်းပြီးလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။ Plusdede ကို Google Play စတိုးတွင်ရနိုင်သည်
Android အတွက် MOBDRO၊ အခမဲ့လိုင်းလိုင်းများကိုအခမဲ့ကြည့်ရှုပါ